« prev 1 … 886 887 888 889 890 … 928 next »
Ciidamo nabad-sugid ah oo howl gallo ka wada Jowhar
Ciidamo isugu jira boolis iyo nabad sugid, ayaa howl gallo amniga lagu sugaayo ka wada degmada Jowhar ee xarrunta gobolka Shabellaha Dhexe, halkaas oo maalmo ka hor ay dowladda Soomaaliya ka qabsatay kooxdii al-Shabaab.
Ahlu Sunnah oo sheegtay in ay isku soo dhiibeen maleeshiyaad al-Shabaab ka tirsan
Maamulka Ahlu-Suna Waljamaaca ee degmada Baled-Xaawo, ayaa sheegay in ay isku soo dhiibeen Sadex dhalinyara ah oo ka tirsana Maleeshiyada Shabaab.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo amaan u jeediyay ganacsatada maal-gashaneysa dalkooda
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Md. Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan), ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay in hadda ganacsatada Soomaaliyeed ay u soo jeesteen qaarkood inay maalgashtaan dalkooda.
Sagal Radio Services • News Report • December 11, 2012
FINALLY, some good news from Somalia: according to a new issue of the French weekly Paris Match, the Somali shilling has doubled in value against the dollar over the last two years.
Maamulka Banaadir oo taageeray guusha ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM (Sawiro)
Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay lagu taageerayay Guulaha Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliyeed iyo kuwa Caawinaya ee AMISOM ay ka gaareen gobolka Shabeelaha Dhexe, kadib markii maleeshiyada haraadiga ah ee Shabaab ay ka xoreeyeen inta badan gobolkaasi.
Wasiirka Gaashaandhigga oo booqday Jowhar sheegeyna in ciidamo booliis ah la geyn doono halkaasi
Wafdi uu hoggaaminaayo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Md. C/xakiin Xaji Maxamuud Fiqi, ayaa shalay booqday magaalada Jowhar ee xarrunta gobolka Shabellaha Dhexe, halkaas oo maalin ka hor ay kala wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM kooxda al-Shabaab.
Wasiirkii ugu horeeyay ee maaliyadda Soomaaliya oo London ku dhintay
ALLAHA u raxmadee waxa xalay magaalada London ee carriga Ingriiska ku geeriyooday wasiirkii ugu horeeyay ee maaliyadda Soomaaliya Xaaji Cismaan Axmed Rooble, oo dhinaca kale ahaa ganacsade si weyn looga yaqaano Soomaaliya.